River Rd Estate Beautiful Ilizwe labucala ukubaleka - I-Airbnb
River Rd Estate Beautiful Ilizwe labucala ukubaleka
Balekela kwindlu yeendwendwe entle yabucala kunye neWinery kwindawo efihlakeleyo yelizwe kwiihektare ezingama-45, iiyure nje ezi-1.5 ukusuka ePerth nakwingingqi yePeel. Bush, umkhondo weBibulmun esangweni, imizuzu ukusuka kuMlambo iMurray. 2km ukusuka kummelwane okufutshane.
Le ndlu yeendwendwe intle eyilwe ngolwakhiwo ibekwe kwipropathi emangalisayo yasemaphandleni kwiihektare ezingama-45 (iihektare eziyi-18). Igumbi elinamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela eli-1 linekhitshi elikhulu elidityanisiweyo / lokutyela / indawo yokuhlala kunye negumbi elikhulu lemidlalo / igumbi lokufunda, elinokuthi lisetyenziswe njengegumbi lokulala lesithathu ngokuguqula isofa ibe yibhedi. Igumbi lokulala elinye linebhedi elingana nokumkanikazi, ikhabethe eyakhelwe-ngaphakathi, isifuba sedrowa, idesika, kunye neengcango zaseFransi ezivuleleka kwibalcony. Igumbi lokulala ezimbini lineebhedi ezimbini zokumkani ezingatshatanga ezinokuthi zisetyenziswe ngokwahlukeneyo okanye zityhalwe kunye ukwenza ibhedi elingana nenkosi, i-wardrobe eyakhelwe-ngaphakathi, isifuba sedrowa, idesika kunye nebalcony encinci yangasese. Igumbi lokuhlambela elikhulu linomzila wetawuli oshushu kunye neshawari edibeneyo kunye nebhafu.
Igumbi lokuhlala / lokutyela linesetingi yetafile yesithandathu, i-daybed enkulu / isofa kunye ne-TV enokufikelela kumajelo asekuhlaleni kunye nesathelayithi. Ikhitshi lixhotyiselwe ukupheka okulula kunye nefriji epheleleyo, iketile, itoaster, i-oven microwave convection, i-electric fry pan, i-rice cooker kunye nesitovu senkampu. Ezinye iindawo zokupheka ziquka i-Weber barbeque kunye ne-oven ye-pizza yangaphandle. Igumbi lemidlalo / igumbi lokufunda libandakanya itafile yetafile yentenetya kunye nesofa enokuguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini.
Le ndlu ine-air-conditioning ngokupheleleyo kwaye ifudunyezwa ebusika yimililo emibini enamandla yeenkuni ezivuthayo. Onke amaphepha kunye neetawuli zinikezelwe kwaye ipropathi inokufikelela kwi-intanethi engenazingcingo.
Lo mhlaba umi kwiihektare ezingama-45 (iihektare ezili-18), uninzi lwayo iyindawo yaseOstreliya engekachukunyiswa, ezele zizityalo nezilwanyana. Kungqonge indlu le kukho iigadi ezintle, ichibi lesele, ioveni yepizza eyenziwe ngamaplanga yangaphandle, igadi yeziqhamo kunye negadi yemifuno evaliweyo, kunye nedama lokuqubha elinomphetho elimangalisayo elijikelezwe ngumgangatho. Ngaphaya kwechibi kukho isidiliya kwaye ngaphantsi kwelo chibi elikhulu, apho unokuthatha i-paddle kwi-kayak okanye kwi-rowboat. Eminye imisebenzi enokwenzeka kwipropathi kukuhamba emahlathini, tennis yetafile kunye nokuphumla ecaleni kwedama. Wamkelekile ukuba uze nenja yakho, ndicela undazise kwangethuba.
4.91 out of 5 stars from 293 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-293
Idolophu eyimbali ye-Dwellingup ibekwe ngokukodwa phakathi kwehlathi elihle lelizwe le-Darling Range kwaye liphakathi kwe-South Dandalup kunye ne-Murray Rivers, malunga ne-1.5 iiyure zokuhamba ukusuka ePerth.
Le ndawo ikwi-7km ukusuka edolophini kwindawo yabucala ngokupheleleyo. Iikhangaru, iikookaburra, iigoanna kunye nezinye izilwanyana zasendle zemveli zininzi kulo mhlaba kwaye zinokubonwa ngorhatya.
Ipropathi ibekwe kanye kwi-Bibulmun Track, inqanaba lehlabathi laseNtshona Australia, umkhondo we-1,000 yeekhilomitha zokuhamba, kunye nokuhamba ukuya kwidolophu yaseDwellingup kuthatha malunga neeyure eziyi-1.5-2. Eminye imisebenzi ngaphakathi nakwidolophu ejikeleze idolophu ibandakanya ukuhamba ngeenyawo, ukukhwela amanzi amhlophe, ukukhwela iphenyane, ukukhwela ibhayisekile entabeni kwindlela yaseMunda Biddi, kunye nokuhamba kwindlela kaloliwe eyimbali yaseHotham Valley.
Umthi weWayini yindawo ethandekayo yokuchitha imvakwemini uthatha iisampulu zewayini zasekhaya kunye neecider, okanye kwisidlo ngaphandle uzame iBlue Wren Cafe, 24 Carat Cafe kunye neVenkile yeKofu, okanye iDwellingup Hotel.
Ndiya kuba lapho ukuze ndikuhlangabeze xa ufika kwaye ndinokuhlala kwipropathi ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa kwindlu enkulu eyahlukileyo, ke uya kuba nendlu yeendwendwe nonke. Ndiya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo okanye ukukunika imfihlo eninzi njengoko uthanda. Ukuba ndikhona, ndiya kuba nam labrador Raffles enobuhlobo kunye nam oya kukubulisa ngomdla!
Ndiya kuba lapho ukuze ndikuhlangabeze xa ufika kwaye ndinokuhlala kwipropathi ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa kwindlu enkulu eyahlukileyo, ke uya kuba nendlu yeendwendwe nonke. N…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dwellingup